Brek | October 2021
Isi > Brek
esi agba obara shimano brek
Otu esi agba obia brakes shimano brakes - durable solutions
Kedu ka ị na-agba ọbara shimano brek n'onwe gị? Etu ị ga - esi gbaa ọbara Shimano Diski Breeki Wepụ ụkwụ azụ. Wụnye Mgbapụta ọbara ọgbụgba site na iji ntụtụ ma ọ bụ mkpọchi. Wepu ihe kwesịrị ekwesị nke ọgbụgba na nkenke allen 2.5 mm. Nzọụkwụ dị na Shimano breeki gbawara obara ma hapụ onye na-etinye ya.
trek diski brek
Trek diski brek - esi nweta ya
Tre Trek anyịnya igwe nwere diski brek? Omenala rim brek abụwo ezigbo nhọrọ mgbe niile, ha ka dịkwa na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe. Mana taa, usoro ikpo okwu Trek ọ bụla nwekwara nhọrọ breeki. Mkpịsị aka diski na igwe kwụ otu ebe na-erite uru maka ndị na-anya ụzọ ọ bụla, ọbụlagodi ndị na-esighị n'okporo ụzọ dị larịị.
shimano 105 diski brek
Shimano 105 diski brek - enwere ike ị nweta ya
Shimano 105 ọ nwere diski brek? Ozi kachasị maka Shimano 105 bụ mgbakwunye nke braki diski na-arụ ọrụ na Shimano na-eduga atụmatụ diski na usoro ahụ. Ngwongwo ohuru ohuru nke BR-R7070 dakọtara na ihe ndị a na-akụzi na ICE TECHNOLOGIES na SM-RT70 rotors (tinyere nke ọhụrụ 140mm) iji nye ndị otu Shimano 105 kachasị nwee ike.
trp carbon brek
Trp carbon brek - ihe ngwọta
Ndi TRP brek ọ bụla dị mma? Anyị ga-ahọrọ TRP dịka otu n'ime ndị kachasị asọmpi na SRAM na Shimano. Ngwongwo TRP Quadiem nwere ngwongwo niile, na-enye ụda olu dị ịtụnanya na ike ya na dimpled, ergonomic lever agụba.
sram direct Mount brek
Sram direct Mount brek - ihe ngwọta nye nsogbu
Ndi igwe kwụ ọtọ kwụ ọtọ? Direct cali-ugwu calipers dị mma karịa ọkọlọtọ otu-bolt brek n'ihi na ha siri ezigbo ike. Nkwado n'etiti isi ihe abụọ na-arị elu kama nke otu, ha anaghị echekarị ka ha gbanwee, yabụ, obere mgbalị gị na lever ahụ lara n'iyi. N'ihi mkpebi ha sara mbara, ha na-enyekwa ezigbo nhichapụ taya.
Mkpo nku nku - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Gịnị ka ịme nku brek pụtara? Omume feathering, a Usoro nke na-ejighị ya na ngwa ngwa nwetụ nsogbu na ntọhapụ nke brek; a na-egbochi brek si akpọchi mgbe ịchịkwa ọsọ gị.
shimano r785 hydraulic diski brek
Shimano r785 hydraulic diski brek - esi edozi
Kedu ka ị si agba ọbara shimano r785 diski breeki? Wepu mkpuchi ọnụ ara ya, wee jupụta sirinji gị na mmiri breeki. Pụpụta ikuku dị ka o kwere mee, kegide sooks na onuara ya ma kpochie ya n'ime ebe. Nwere ike iji igodo hex ma ọ bụ ihe mkpuchi igbe mepee ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na-elezi anya ka ị ghara ịkụ ọkpọ ahụ. You're dịla njikere igba obara.18. 2016.
uci diski brek
Uci diski braki - otu esi edozi
Ndi diski brek UCI iwu? UCI gosipụtara na nkwupụta mgbasa ozi ụnyaahụ na a ga-enye ikike ịmegharị diski iji mee njem n'okporo ụzọ (na BMX) dịka nke July 1st, mgbe ọtụtụ afọ dabara na mmalite nke hụrụ ka ha kwadoro na usoro ikpe, machibido iwu nwa oge, wee kwadoro ọzọ. 22. 2018.
brek na-adịghị arụ ọrụ na ihu igwe oyi
Breeki anaghị arụ ọrụ na ihu igwe oyi - akwụkwọ nkọwa zuru ezu
Gịnị mere na brek anaghị arụ m ọrụ ma ọ bụrụ na oyi na-atụ? Condensation nwere ike ifriizi booster diaphragm na / ma ọ bụ lelee valve si otú a na -emepụta pedal brek siri ike. Ugbo ala a na-adaba na oge oyi ma na-edebe ya n'ime ebe a na-edebe ya n'abali nwere ike inwe ihe mgbaàmà a. Zọ ọzọ isi dozie nsogbu a bụ ịhapụ igwe ọkụ tupu ọ pụọ.
ezigbo hydrolic brek
Avid hydrolic brek - ajụjụ nkịtị
Ndi Avid brek dị mma? Final mkpebi: M ga-agba ọsọ a brek ọ bụla igwe kwụ otu ebe dị m akpa. Ha dị mfe maka njem ụbọchị niile na igwe kwụ otu ugwu, ma ọ bụ buru oke ibu iji gaa n'elu ala na Whistler ruo mgbe ị ga-ere ọkụ karịa mpempe akwụkwọ gị. Nnukwu mgbanwe olu, ergonomics, na aesthetics na-abịa ogo.
magura okporo ụzọ brek
Magura brek okporo ụzọ - olee otu anyị ga-esi edozi
Magura bụ onye German? KG, nke a maara dị ka Magura, bụ ụlọ ọrụ German nke dị na Bad Urach guzobere na 1893 nke na-arụpụta ma kesaa ngwaahịa na ọrụ igwe kwụ otu ebe gụnyere nkwusioru okirikiri na breeki, ugogbe anya anwụ, okpu agha, ngwugwu, akpa, na uwe.
ultegra haịdrọlik diski brekị
Ultegra hydraulic diski brek - azịza na-adịgide adịgide
Ndi Shimano Ultegra diski breeki haịdrọlik? SHIMANO ULTEGRA Hydraulic Disc breeki N'azụ Caliper.
deore xt brek
Deore xt brek - ngwọta bara uru
Deore XT brek dị mma? Na mkpokọta. Ngwongwo Shimano XT kachasị ọhụrụ kwesịrị imeju ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ndị na-anụ ọkụ n'ahịrị nke ahịrị ahụ nwere ike ịchọ ntakịrị ịmịkọrọ iji nwee ekele maka mmelite ndị ahụ. Site na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na mbido na ndozi dị mfe, XT brek ka bụ ndị a ga-akụ.
Usoro brekị - azịza dị mfe maka ajụjụ
Ndi SRAM Code R brek di nma? Usoro SRAM R bu ihe siri ike / ngọngọ enduro, na-enye mgbatị dị ukwuu na ndụ nkedo dị mma, na-enweghị njide na ntụgharị uche nke ụfọdụ asọmpi. 6. 2018.
sram larịị brek
Sram brakes - chọọ ihe ngwọta
Ndi SRAM breeki haịdrọlik? The Guide bụ ihe magburu onwe haịdrọlik diski breeki; otu n'ime ndị kasị mma na ahịa. N'iji obe obe abuo nke piston ohuru na uzo uzo elebara anya, SRAM alaghachila ebe o di tupu TaperBore: Otutu uzo nkpuchi hydraulic ya na-eji uzo oge.
esi emezi brakes shimano
Etu esi edozi brashịk brek - azịza ya
Kedu ka ị si edozi bọọlụ hydrogen Shimano?
esi ọcha disk brekị
Esi ọcha disk brekị - mfe azịza nke ajụjụ
Gịnị ka m nwere ike iji hichaa diski brek? 'Anyị na-akwado a ncha nwayọọ na mmiri ọcha diski brekị. Nke a bụ iji nyere aka izere mmetọ nke pads na rotor. Breeki na-ehicha ihe na ọgwụ spra ndị ọzọ adịghị mkpa. Ejila ihe eji apịkọta ya iji mee ka brek dị ọcha dịka ndị a nwere ike ibute ọgbụgba ọkụ.22.06.2019
Mgbapu igwe kwụ ọtọ - mkpebi ndị bara uru
Kedu igwe kacha mma maka njem? Vikes Bikes V7 Sevengbọala Asọmpi kachasị mma. $ 600. Brooklyn Bicycle Co. Franklin 3. Linus Dutchi 1 Igwe kwụ otu ebe. $ 459. Linus Roadster Egwuregwu. $ 679. Brompton M6L mpịachi Bike. $ 1,590. Dahon Mwepụta D8. $ 979. Tern Link C8 mpịachi Bike. $ 849. Giant Expressway mpịachi Bike. $ 660.
kpọmkwem ugwu brek
Direct ugwu brek - esi eme ihe
Gịnị bụ kpọmkwem brek brek? Direct Mount brek bụ ihu ọma ala-profaịlụ, dọrọ-eguzogide brek na-anọdụ ala n'ezie na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ndụdụ. Ha na-agbakwunye site na ebe a kapịrị ọnụ na ndụdụ toro eto ka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe enweghị ike iji Direct Mount calipers.11.08.2015